HomeHealth $ EducationNews in Englishhuman-rights-issuesContact	Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka Somaliland Oo Sharaxaad Ka Bixiyay, Hawsha Xafiiskiisa, Shaqada Garyaqaanka Guud Ee Madaxweyne Siilaanyo Magcaabay Iyo Heshiisyo Somaliland Gashay	Monday, 07 May 2012 16:16	Hargeysa(ANN)Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka Somaliland Mr. Xasan Axmed Aadan, ayaa sheegay in xafiiskoodu aannu habayaraatee cidna dusha ka saarin dambi aanay lahayn, sidoo kalena aanay qofna ka dhaafin dembi uu leeyahay, isagoo dhinaca kalena ka hadlay dib-u-habayn lagu
Su’aal: Xafiiska Xeer-ilaalinta Guud baryahan dib-u-habayn baad ku wadeen, waxaana nagu maqaallo ah in hawlwadeennada xafiiska Xeer-ilaalinta la kordhiyey oo dumar badan lagu soo kordhiyey oo ku-xigeenno Xeer-ilaaliyaha Guud loo magacaabay, hawsha xafiiska iyo dumarkaas la magacaabay warbixin naga sii? Jawaab: Waa run oo waxa la qaatay toban xeer-ilaaliye oo jaamacadaha dalka ka qallin-jebiyey, sharciga shaqaaluhuna wuxuu sheegayaa in wiil iyo gabadhba shaqada loo siman yahay, waxana weeye kuwii u soo baxay ee sinnaanta lab iyo dheddigga (Gender) ku salaysnaa, waana shan gabdhood iyo shan wiil, wax weyna gabdhuhu caddaaladda way ka tarayaan, waxana dhaca kufsiyo, xadgudubyo carruurta iyo dumarka jira, markaa dumarku waxay ka cawdaan in ragga uunyihiin kuwa wax eedaynaya oo kiisaskoodii meel la iska dhigo, waanay noo fiican tahay inay garsoorka ku jiraan haweenku, xagga caddaymahana wax badan oon ragga loo sheegi karin oo dumarku gaar isugu sheegi karaan oo dhinaca caddaaladda ah waa loo baahan yahay.
Su’aal: Tobankan Xeer-ilaaliye-ku-xigeen ee la magacaabay sidee bay magacaabistoodu u waafaqsan tahay dastuurka iyo qaabka xafiiska Xeer-ilaalinta Guud? Jawaab: Anigu ma magacaabo. Xeer-ilaaliyayaasha ayaan magacabaa anigu. Xeer-ilaaliye-ku-xigeennadana Xeer-ilaaliyaha Guud waxa magacaaba Guddida Caddaaladda, tobanka qof ee la soo magacaabayna waxa ansixiyey guddidaas.
Su’aal: Waxaad ka dhawaajisay in garsoorku madaxbannaan yahay, Guddida Caddaaladdana awoodda ugu badan leh, marka laga yimaad Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Xeer-ilaaliyaha Guud oo madaxweynuhu magacaabo, sida ku cad dastuurka xubnaha ugu badan guddida caddaaladdu waxay ku yimaaddeen digreeto madaxweyne; miyaan la odhan karin qodobka dastuurka laftiisa ayaa garsoorka dhaawacaya oo waxay ahayd in garsoorku ka madaxbannaanado awood dawladeed. Maaliyad ahaana garsoorku ma madaxbannaana arrimaha laftoodu miyaanay garsoorka dhaawac u geysanayn? Jawaab: Marka la eego xubnaha guddida caddaaladda; afar nin waxa soo magacaaba golayaasha, xukuumadna may soo magacaabin, Guddoomiyaha Maxkamadda Sarena waad ogtihiin xasaanadduu leeyahay oo labada gole baarlamaan ayaa isugu taga ansixintiisa, waana nin haysta dammaanad adag oo xooggan oo ah inaannu u habran cidna, xubnuhuu madaxweynuhu soo magacaabana laba garsoore oo Maxkamadda Sare ku jira, kuwa kalena waa aniga. Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaalaha iyo Agaasimaha Guud ee Caddaaladda, kuwaasina waxay ka yihiin kuwa ugu yar xubnaha guddidaas.
Su’aal:Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud waa xafiiska eedaha soo ooga, muwaaddiniinta amma siyaasi ha noqdo ama shacbi oo qof dhan baad ku doodaan in nafta laga jaro, ummadduna shakibay idinka qabaan oo waxay tidhaa xukuumadda ayaa dabada riixda, aragtida noocaas ah amma dadka eedaysanayaasha ah maxaad farriin u jeedin lahayd? Jawaab: Danta caddaaladda ayaa sidan fartay in cidna wax eedayso, cidna difaacdo, cidna ka garnaqdo oo dhinacyadaas caddaaladdu ku dhisnaato ayaa looga baahday. Qaanuun iyo nidaam dawladnimo ayeynu samaysanay, qanuunkaas haddaanay cid ilaalinayn; ma aha dil uun ee waa in la ilaaliyo nidaamkii, kaannu leenahay dil ha lagu xukumanna waa mid nidaamkii jebiyey, qofka noocaas ah haddaan la ciqaabina oo qofka qof dila loo dilin, loona ciqaabin dalku wuxuu noqonayaa fawdo, kala dambayn iyo nidaamna ma jirayo, intaynu dhaano Soomaalida xabbadda isla dhacaysaana waa nidaamka iyo kala dambaynta oo la ilaaliyey. Xafiiska Xeer-ilaalintu cid aan dambi lahayn lama doono, cid dembi lehna ma dhaafayo.
Suaal: Adinku waxa tihiin Xeer-ilaalinta Guud ee Qaranka dhawaan waxa la magacaabay Xafiiska Garyaqaanka Guud ee Qaranka, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa waxyaabaha aad ku kala duwan tihiin labadiina xafiis? Jawaab:Xeer-ilaaliyaha Guud: Dadka qanuunka aad u yaqaan way kala fahmaan, balse guudka. qaryaqaanka iyo xeer-ilaayaha ayaanay dadku kala sugi karin, laakiin annagu dambiga, sharciga iyo xadgudubyada ayaannu ilaalinaa, iyaguna waxa weeye dawladdu markay dhinac ka tahay arrimaha maddaniga ah oo ah heshiis ay gashay oo qareen bay u baahan tahay dawladdu markay is dacwaynayaan nin roodhi siiya iyo mid ciidammada bariiska u keenaa, dawladdu awood ay ku maquuniso ma leh oo waa dhinacyo heshiiyey. Markay heshiisyada dawladdu gasho shaadhka bannaankay iska dhigtaa, waxaanay u baahan tahay qareen.
Annaga dastuurkaa na abuuray oo hay’ad ka ballaadhan baannu nahay, dastuurkuna in badan buu kaga hadlayaa hay’adda Xeer-ilaalinta Guud iyo waajibaadkeeda, markaa xafiiska Garyaqaanka Guud waxa lagu dhis